ဘေဘီလေးတို့ ကိုယ်ခံအားတိုးစေမယ့် စားစရာလေးများ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 05/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နုနယ် ငယ်ရွယ်လွန်းတဲ့ ဘေဘီလေးတွေကို ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ဒီလို ဂရုစိုက်တဲ့အခါ အရေးကြီးဆုံးက အာဟာရဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပါ။ အာဟာရဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးပြီးရင်လည်း ကလေးက စားမှ အာဟာရပြည့်ဝမှာပါ။ ဒီတော့ ဘေဘီလေးတွေလည်း ခံတွင်းလည်းတွေ့ ကိုယ်ခံအားလည်း ပြည့်စေမယ့် စားစရာလေးတွေအကြောင်း မေမေတို့ သိအောင် ဝေမျှပေးမယ်နော်။
ဘေဘီလေးတို့ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ကိုယ်ခံအားဖြည့် စားစရာလေးတွေက ဘာတွေများလဲ…………….
ဘေဘီလေးက ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဘေဘီလေးကို ဒီ အစားအစာလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဒိန်ချဉ် – ဒိန်ချဉ်မှာ ဘေဘီလေးတို့ရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (probiotics) တွေပါနေလို့ပါ။ ဒီသက်ရှိဘက်တီးရီးယားလေးတွေက အူနံရံတွေကို ကျန်းမာစေပြီး အာဟာရ စုပ်ယူမှုကိုကောင်းစေသလို ဝမ်းဗိုက်နဲ့ အစာခြေစနစ် ပြဿနာ ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ စုပ်ယူနိုင်တာက ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်က အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (probiotics) ကြွယ်ဝစွာ စားသုံးတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ အအေးမိ၊ဖျားနာနိုင်ခြေ နည်းသလို နားပိုးဝင်ကူးစက်တာနဲ့ လည်ချောင်းနာ၊ လေနာ ပြဿနာတွေ ကင်းပြီး အစားကိုလည်း ကောင်းကောင်း စားကြပါတယ်။
သစ်ကြားသီး – omega-3 fatty acids ကြွယ်ဝတဲ့ သစ်ကြားသီးက ဘေဘီလေးတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ omega-3 fatty acids ကဖျားနာမှု ကင်းစေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သစ်ကြားသီးကို ကြိတ်ခြေပြီး cereal ထဲထည့်ကျွေးလို့ ရပါတယ်။
သစ်သီးတွေ – သစ်သီးတွေကလည်း ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ ဂရိတ်ဖရုတို့က ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပေးနိုင်မှာပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ – ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက အမျှင်ဓာတ်ပါတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်သလို ဗီတာမင် ကြွယ်ဝမှုက ကိုယ်ခံအားကိုလည်း ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကန်စွန်းဥ၊ မုန်လာဥနီတွေက ကလေးကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးမှာပါ။
အဆီမပါတဲ့ အသား – ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ ပရိုတင်းက တော်တော်လေး အရေးပါပါတယ်။ ပရိုတင်းပြည့်ဝမှုက ကိုယ်ခံအားကို​ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာပါ။ အသားတွေမှာက ပရိုတင်းအပြင် ကိုယ်ခံအားကို အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် ဇင့်ဓာတ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီဓာတ်က ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအချို့
ကလေးကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးမှုအပြင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ အတိုင်းပါ လိုက်နာဖို့လည်းလိုပါဦးမယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ – အစားအစာ ရွေးချယ်တဲ့အခါ သတိထားရမှာက အစားအစာတိုင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူးဆိုတာပါ။ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ကလေးက ခံတွင်းတွေ့နိုင်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာကတော့ အသေအချာပါ။ ကလေးအတွက် အစားအစာ ရွေးချယ်ပေးတဲ့အခါ လွယ်ကူတာထက် လတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်တာကို ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။
လိုတာထက် ပိုမကျွေးမိပါစေနဲ့ – ကီဝီသီးစားလို့ ကျန်းမာတာ မှန်ပေမယ့် ကီဝီသီး ၁၀ လုံးစားလို့တော့ ကလေးက ပိုကျန်းမာ မလာပါဘူး။ ကလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပမာဏကပဲ အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်ကို လုံလောက်တဲ့ ပမာဏထက် ပိုမကျွေးပါနဲ့။
တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ပါ – ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ဆိုရင် ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှ ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
Immunity-Boosting Snacks for Kids https://www.webmd.com/parenting/features/immune-system#2 Accessed Date 29 April 2020
Top 10 Immune System Boosting Foods For Kids (with ideas and recipes!) https://www.superhealthykids.com/recipes/top-10-immune-system-boosting-foods-kids-ideas-recipes/ Accessed Date 29 April 2020